विश्व « Sajilokhabar
श्रीमानलाई तह लगाउन गोप्य क्यामरा, यौनसम्पर्क गर्दै गरेको फोटो सार्वजनिक
रियाद । साउदी अरबमा एक महिलाले आफ्ना पतिलाई घरमा काम गर्ने महिलासँग यौनसम्पर्क राख्ने गरेको शंका लागेपछि गोप्य क्यामराले सो तथ्य पत्ता लगाएकी छिन् । क्यामराको पिक्चरअनुसार पतिले घरमा
मालद्वीपमा राष्ट्रपतिको हत्या योजनाको आरोपमा उपराष्ट्रपति पक्राउ
माले, ७ कात्तिक । मालद्वीपका उपराष्ट्रपति अहमद अधीबलाई उनले मालद्वीपकै राष्ट्रपतिको हत्या प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको समाचार छ । प्राप्त समाचारअनुसार गत महिना मालद्वीपका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनको हत्या प्रयास
जति बढी सेक्स, त्यती नै पैसा !
एजेन्सी । विश्वमा अनौठा अनौठा देश हुन्छन् जहाँ सेक्सलाई बढी महत्व दिईन्छ । कारण हो कम जनसंख्या हुनु । विश्वमा जनसंख्या बढिरहेका बेला केही देशमा भने पर्याप्त जनसंख्याको अभावमा
रिस पोख्न शवसँग पालैपालो यौनसम्बन्ध
बनियापुरवा । भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको बनियापुरवामा एक महिलालाई गोली हानेर हत्या गरेपछि दुई बदमाशहरूले बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कानपुरको नवाबगञ्जस्थित बनियापुरवामा एक साताअघि लुटपाटको विरोध गरेको
विवाह गरेपछि चुनाव जित्न सजिलो
सीतापुर । भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा आरक्षणमा चुनाव जित्नका लागि एक युवकले अनुसूचित दलित युवतीसँग विवाह गरेको खुलासा भएको छ । पञ्चायत चुनावका बेला सीतापुर जिल्ला निवासी अविवाहित युवकले अनुसूचित
सेक्स सम्बन्धी केही चर्चित विश्व किर्तिमान
दुनियामा विभिन्न कामकुरामा मानिसहरुले किर्तिमान राखिरहेका हुन्छन् । कतिपयले सकारात्मक कामका लागि किर्तिमान राख्छन् तर कतिले उरन्ठेउला काम गरेरै भएपनि गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछन् । दुनियाकै सबैभन्दा बिकाउ विषय मानिएको
सेक्स नगर्ने छात्रालाई विद्यालयमा रामधुलाई !
एजेन्सी । ब्रिटेनको बर्मिंघमको एक स्कुलले आफ्ना छात्रालाई सेक्स नगरेको अभियोगमा कुटपिट गरेर यानता दिँदै आएको खुलासा भएको छ । त्यहाँ मुस्लिम समुदायका छात्रालाई जो आफ्ना श्रीमानसँग सेक्स गर्दिनन्
रुसी ह्याकरले बनाए हत्यारा पेनड्राइभ
एजेन्सी । यसको नामै हो ग्याजेट किलर । किनकी यसले तपाइँको कम्प्युटर देखि लिएर टेलिभिजन सबैलाई खरानी बनाइदिन सक्छ । एकजना रुसी ह्याकरले यस्तो पेनड्राइभको निर्माण गरेका छन् जसले जुनसुकै
भारतले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री हत्याको योजना बनाएको खुलासा
इस्लामावाद, २ कात्तिक । भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ ९रअ० ले आफ्ना कार्यकर्तालाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र जमत्तुड दावाका प्रमुख हफिज मुहम्मद सइिदलाई हत्या गर्न अनुरोध गरेको
दिल्लीमा साढे दुई वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार
दिल्ली, १ कात्तिक । भारतको राजधानी दिल्लीमा बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाले मोदी सरकार र दिल्ली सरकार दुबैलाई समस्या भएको छ । बेलाबेला चर्चामा आइरहने सामूहिक बलात्कारको घटनाले एक पटक